IVivo Nex: Iselfowuni entsha yefemu ene-Ultra FullView yoyilo lwesikrini | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IVivo Nex: Iselfowuni entsha yefemu ene-Ultra FullView yoyilo lwesikrini
Iiyure ezimbalwa ezidlulileyo, IVivo ibhengeze iVivo Nex kwiinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo, itheminali entsha yenkampani okuza emva kokunikezelwa kwe-Vivo Apex kwi-Mobile World Congress e-Barcelona eyenzeke ekupheleni kuka-Februwari. Khumbula ukuba eyesibini ekhankanyiweyo icwangcisiwe kunye nekhamera enokurhoxiseka ngokulula kunye nescreen esihlala i-98% yepaneli yangaphambili yonke.
IVivo Nex ifika ineenkcukacha zobuchwephesha eziya kuthi, ngaphandle kwamathandabuzo, zibenze abanye bangcangcazele iiflegi kwintengiso yemarike kwiimpawu zayo ezifanele uluhlu oluphezulu oluthembisa okuninzi. Sinikela kuwe!
Esi sixhobo siza sixhotyiswe ngescreen se-Super AMOLED ye-Ultra Fullview ye-6.59-intshi kwisisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2.316 x 1.080 ahlala kuma-91.24% yendawo yonke engaphambili. Ifowuni iza netekhnoloji Ukuphoswa kwesandi oko kuthetha ukuba izithethi zidityaniswe nescreen. Yintoni egqithisile, Zonke izivamvo kwisixhobo zifihlwe phantsi kwaso, kubandakanya umfundi weminwe.
Kwiimbilini zayo, I-Nex inikwe amandla yi-octa-core Qualcomm Snapdragon 845 SoC ecaleni kweAdreno 630 GPU, yi-8GB ye-RAM, i-256GB yendawo yokugcina yangaphakathi kwaye ixhotyiswe ngebhetri ye-4.000mAh.
Kukho nezinye iimodeli ezimbini: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elinye kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezifanayo ezinikiweyo ngaphandle kwememori ye-RAM eyi-6GB kunye neROM eyi-128GB kuphela, kwaye isezantsi kakhulu eza ne-Qualcomm Snapdragon 710 chip entsha, kunye ne-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yeROM ngokunjalo. Ukuphumla, izinto zihlala zinjalo kwiitheminali ezintathu.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, IVivo Nex iza nekhamera engasemva eyi-12-megapixel ngasemvaIsenzi esona siphambili siyi-Sony IMX363 eneepikseli ze-1.4μm, f / 1.8 ukuvula kunye nokuzinza komfanekiso we-axis ezine, kunye neyesibini ngesisombululo se-5MP. Ngokubhekisele kwikhamera yangaphambili, le ngu pop ip 8 megapixel esinokuyifihla nanini na sifuna.
Izixhobo zineVivo yeMidlalo yeVivo, Oku kwenziwa ngokubambisana neMidlalo yeTencent. Injongo yeli nqaku kukubonelela ngamava okudlala ngokusekwe kwisoftware kunye nokwenza izinto zehardware. Yintoni egqithisile, zenzelwe ngokukodwa ukuqhuba imidlalo eyenziweyo nge-Injini engabonakaliyo. Ukongeza, bakwabonisa inkqubo yesandi esingqonge i-3 ye-7.1D enkosi kumbutho we-dtsX, kwaye bane-Vivo Hi-Fi V1 System In Package technology for high fidelity sound through headphones.
Ii-smartphones nazo ziza zixhotyiswe nguJovi, umncedisi welizwi lomntu osebenza ngokusekwe kwitekhnoloji yobukrelekrele bokuzenzela.. Ziyahambelana nezinto ezahlukeneyo ezisebenzayo, ezinje ngokufunda imephu ngobuchule, ii-encyclopedia, ukuthenga, ukuguqulela ngexesha langempela, ukuskena kunye nokwaziwa kwescreen, phakathi kwabanye. Baza ne-interface yomsebenzisi entsha yesiko, Vivo ulungelelwaniso lolwenziwo olusebenza kwinkqubo yokusebenza ye-Android Oreo ngaphandle kwebhokisi. Ukongeza koku, iitheminali ziyahambelana nokusebenza kwe-SDK kwinqanaba lenjini, ixhasa itekhnoloji ye-antenna ye-HPUE, kunye nenkqubo yokupholisa eya kugcina iifowuni zikhululekile kubushushu.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweVivo Nex
IVivo NEX iya kufumaneka kukhetho lwemibala emibini: I-Diamond emnyama (emnyama) kunye neRuby Red (bomvu). Imodeli yokuphela okuphezulu ene-8GB ye-RAM kunye ne-256GB yememori yangaphakathi inexabiso nge-4.998 yuan, emalunga nama-662 euros ngokutshintshiselana, ngelixa isixhobo esiphakathi kuxabisa i-4.498 yuan (malunga ne-595 euros). Kwelinye icala, okwahlukileyo kwexabiso eliphantsi kunye neprosesa yeQualcomm Snapdragon 710 kubiza i-3.898 yuan, eguqulela malunga ne-516 euro.
Uku-odola kwangaphambili kwe-Smartphone kuqala ngomso e-China, Kodwa inkampani ayikabhengezi ukuba iya kukhutshwa nini ngokuthe ngqo kwimarike, nokuba ayizukuthengiswa kwihlabathi liphela. Masithembe njalo…
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IVivo Nex: Iselfowuni entsha yefemu ene-Ultra FullView yoyilo lwesikrini
I-Samsung Galaxy S10 ayizukuba nesithethi sangaphambili kwiifowuni